सरकार छोडेर आन्दोलनको तयारीमा उपेन्द्र-बाबुराम ! — onlinedabali.com
सरकार छोडेर आन्दोलनको तयारीमा उपेन्द्र-बाबुराम !
काठमाडौँ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनप्रति असन्तुष्ट बनेको समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने तयारी गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई नसोधेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले यसअघि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गनप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । उपप्रधान तथा स्वस्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्दै आएका यादव भारत भ्रमणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गन गरेका थिए । यादवले भारतबाटै त्यसको विरोध जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएको टिप्पणी गर्दै समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बताउन थालेका छन् । उनीहरुले अपमान सहेर सरकारमा नबस्ने बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालय पुर्याइएको र पूर्वसहमतिविपरीत आफूहरुले तीन मन्त्री पाउनुपर्नेमा एकजना हटाइएको भन्दै समाजवादीले अबपनि संविधान संशोधनको विषय अघि नबढे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समाजवादीले पाएको एक राज्यमन्त्रीलाई पनि हटाइसकेका छन् ।
अब समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने र त्यसो नभए सरकार छाडेर आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाउन लागेको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनको विषय अघि नबढे सरकार छाड्ने बताए ।